ATN: December 2009
အားလုံး နှစ်သစ်မှာ အစစ အရာရာအဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
နှစ်သစ်ကူးအတွက် သူငယ်ချင်းများကို အိမ်တိုင်ယာရောက် နှုတ်မဆက်နိုင်တော့ပါ။
at 9:39 PM 22 comments:
“အမေ... အမေ... အမေ... ”...
ကျနော့် အတွက် ဘုရားသခင်...
ကျနော့်အတွက် လွတ်လပ်ကျယ်ပြောနေသော ကွင်းပြင်...
ကျနော့်အတွက် အဖြူစင်ဆုံးသော မေတ္တာရှင်...
အမေ့ကို ကျနော်တို့ ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့အခါ
တမ်းတ လွမ်းဆွတ်ကြရရုံပါပဲ... အမေ...
အမေက ကျနော်တို့ကို ကျောခိုင်းသွားပြီးတဲ့အခါ
အမှန်တရားကို ချစ်မက်နေသူတဦး ကို
အမေ့အတွက် လူတွေ ငိုဖြစ်နေတာကိုပဲ
ကျနော့် ခြောက်တီးခြောက်ချက် ကဗျာ တပုဒ်က
အမေ့ကို ကျနော် ချစ်တယ်...
ကျနော် အခု ထိ ထွေးပွေ့ ရရှိနေသေးတယ်...
အသက် လေးဆယ်ကျော်နေတဲ့ လူတယောက်ဟာ
ကလေးလေး တယောက်ပါပဲ အမေရယ်...
ကျနော့် မျက်ရည်တွေနဲ့ ရေးခဲ့ပါတယ်...
အမေ့ကို ကျနော် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်
အာမင်.. .... ...
တခြား ဘာရည်ရွယ်ချက်မှလည်း မရှိပါဘူး...
မင်းဟာ ရှုပ်ရှက်ကို ခတ်လို့...
ပြောလို့ ကောင်းနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး...
ဒီဇင်ဘာဆိုတဲ့ မင့်အကြောင်း တချက်ကိုပဲ
ဒီဇင်ဘာက ရှုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး...
ဟိုဟာ သည်ဟာတွေက လာရှုပ်တာပါ...
ဒီဇင်ဘာ တရက်... တဲ့...
ဒီဇင်ဘာဟာ စ သေပြီ...
၁၀၈...၁၀၉...၁၁၀... ၁၁၁... ၁၁၂...
အဲလ်ဘတ်နိုဘဲလ် သေဆုံးတဲ့ နှစ်လည်မှာ
အားလုံးကို ပေါင်းပစ်လိုက်ပါ ဒီဇင်ဘာ...
မင့် အတ္ထုပ္ပတ္တိဟာ ပြည့်စုံသွားပါပြီ... .... ...
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်သော ခရစ္စမတ် ဖြစ်ပါစေ...
Prospero Bano y Felicidad.
ငါ မျှော်လင့်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ နေ့ရက်များ...
ပျော်ဝင်နေရဲတဲ့ နာရီ တလုံး...
မင်းကတော့ ပြုံးနေဦးမယ် ထင်တယ်...
ဆန်တာကလော့စ်က မင့်မြို့ပေါ် လှမ်းအလာ
ငါကတော့ မင့်လမ်းတွေကနေ ပြန်ခွာ
နှင်းတွေ တဖွဲဖွဲ ကျနေတဲ့ တရက်မှာ
ငါကလည်း မင်းကို ကျောခိုင်းထွက်ခွာ
ကောက်ကွေ့မှုတွေနဲ့ပဲ ဖြောင့်တန်းနေခဲ့တဲ့ ငါ့လမ်းတွေ...
ခြောက်သွေ့မှုတွေနဲ့ပဲ စွတ်စိုနေခဲ့တဲ့ ငါ့အချိန်တွေ...
ချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ပဲ ပြည့်ဝနေတဲ့ ငါ့ ပြက္ခဒိန်တွေ...
မီးမှိန်မှိန်လေးတွေနဲ့ပဲ လင်းလက်ခဲ့ရတဲ့ ငါ့ညတွေ...
နွေးထွေးစွာ လဲလျောင်းမှေးစက်ခဲ့ဖူးသော နေ့ရက်တွေ...
ဘယ်အခါမှ ငါ မမေ့လေဘူး...
ခုရက်ထဲ အချိန်လည်း နည်းနည်းရနေတာမို့ အွန်လိုင်းကို မကြာခဏ သွားဖြစ်နေပါတယ်။ နဂိုရ်ကတော့ အဲလိုမျိုးသွားဖြစ်မယ် မထင်လို့ တလ-နှစ်လလောက်တော့ ဘလော့ရေးတာ နားရပါဦးမယ်လို့တောင် ကျနော် ပြောထားမိသေးတယ်။ တကယ်ကတော့ စိတ်ထဲမှာက နေ့တိုင်း တခုမဟုတ် တခု ရေးချင်နေတာပါ။ သို့သော်လည်း တကယ့်တကယ်ကတော့ အချိန်တွေ ရှိတာတောင်မှ၊ ရေးချင်စိတ် ရှိတာတောင်မှ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဘာမှ မရေးဖြစ်ပါဘူး။ စာတွေ ကဗျာတွေ ရေးတယ်ဆိုတာက ဇွတ်ရေးလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ (ကျနော့်အတွက် ပြောတာပါ)။ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်း တစုံတခု ရှိသည့်တိုင်အောင်၊ စာတပုဒ် ကဗျာ တပုဒ် ရေးဖြစ်လာအောင် တိုက်တွန်း စေ့ဆော်ချက်တွေ ရှိသည့်တိုင်အောင် စာတပုဒ် ကဗျာတပုဒ် ဖြစ်လာဖို့က မလွယ်ပါဘူး။ သည်လိုပြောလို့ ကျနော်က ဈေးတင်နေတယ်လို့ မထင်စေချင်ပါဘူး။ စာတပုဒ်၊ ကဗျာတပုဒ် ဖြစ်လာဖို့ အကြောင်း အချက်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ (သဘောမတူသူများ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်)။
ခုတော့ စာတပုဒ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းက ရှိလာပါပြီ။
ကဗျာဆရာ တင်မင်းထက်က ကျနော့်ကို တက်ဂ်လာပါတယ်။ ပထမကဗျာ-ဆိုပြီး ရင်ခုန်သံတွေကို အဖော်ညှိလာတဲ့အခါ... ကျနော်ကလည်း ဘာများ ပြောနိုင်မည်နည်း... လို့.... ပြဇာတ်ဆန်ဆန် ပြောရတော့မယ် ထင်ပါရဲ့...
သို့သော်လည်း... ကျနော့်အတွက်က... ပထမ ကဗျာတွေက အများသားပဲ... ပထမဆုံး ကျနော် စပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာကတော့ ပထမဆုံးပဲမို့... ခုထိတော့... သတိရနေဆဲ... (ခေါင်းစဉ်ကတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး)
အဲသည်ကဗျာကလည်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ဗိုလ်တထောင်နယ်မြေ) မှာ လက်ရေးနဲ့ ပုံနှိပ်ပြီး လက်နဲ့ပဲ ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကလေးမှာ ပထမဆုံး ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ (ကဗျာရူးတယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးသော ပုံနှိပ် ကဗျာပေါ့လေ)
အဲသည်တုန်းက ကျနော် ယူထားခဲ့တဲ့ ကလောင်အမည်က - ဆောင်းလွမ်းအေး- ပါ။
အဲသည် ကလောင်နဲ့ပဲ ကျနော် ကဗျာတချို့ ရေးဖွဲ့ခဲ့ဖူးတယ်။
နောက်တော့... သေနတ်ပြောင်းတွေ ခေါင်းထောာင်ထတဲ့ နေရာမှာ ကျနော် ရှင်သန်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့...။
သည်အခါ ကျနော်ဟာ ဆောင်းလွမ်းအေး မဟုတ်တော့ဘူး...
ကျနော် အောင်သာငယ် ဖြစ်သွားပြီ...
ကဲ... လာပါပြီ... ကျနော့်ရဲ့... ပထမကဗျာ...
သံသရာ... ဆွဲ... ဆန့်လို့... ဘယ်လောက်ပင် ရှည်ရှည်...
ရေမြေအလိုက်... စိုက်စိုက်ပါလို့... မျောလိုလည်း... မျောပါစေ...
သစ္စာတရား... ထွန်းကားရာ... ငြိမ်းချမ်းသာယာသောနယ်မြေ...
(ချစ်သူရေ... ကွေကွင်းရခြင်း... ဆိုတဲ့... ဝေါဟာရတွေ...
တလုံး...တပါဒမျှ... မကြားလို... မနာလို...
ငိုလည်း... မခွဲ... ရီလည်း... မခွာ... ချစ်သူနဲ့သာ... ဆိုရင်လေ... )၂
လေဟာပြင်... ခရီး... ဖြတ်စီးပြီးသကာလ...
ဘယ်လ... ဘယ်ကမ္ဘာ... သွားရ... သွားရ...
အတူ... မေတ္တာဆက်ဂဟေ... မိုးမြေဘယ်မှာ... ဆုံးပါစေ...
လှောင်ချိုင့်စံဘ၀... လွတ်မြောက်လာရ... ငှက်ငယ်ငယ်လို...
ဒေါင်းချင်ရင် သည်မှာ ဒေါင်းပါ။
ဟိုက်ဝေးနဲ့ နပမ်းလုံးလာခဲ့မိတဲ့ ငါ
နှင်းတွေ ဖို့ထားတဲ့ မင့်မျက်နှာကို
လက်ရဲ ဇက်ရဲ နေနိုင်ပုံများ
နှင်း၊ မြူ၊ မိုးနဲ့ ရေခဲတွေကြား
အနွေးထည်တွေ အထပ်ထပ် ၀တ်ထားတဲ့ကြားထဲက
ဓါးတစင်းလို တချက်ချင်း တချက်ချင်း
နွေးထွေးမှုတွေ အေးအေးခဲခဲ ဖြစ်နေတယ်...
ဘယ်အရာက ငါ့ကို နွေးထွေးစေမယ်...
ဘယ်အရာက ငါ့ကို စိုပြည်စေမယ်...
ကံကြမ္မာကမ်းခြေမှာ ပန်းတွေလို ပွင့်ပြလို့
မင်း သိသွားတဲ့အခါ ရင်ကွဲမယ်...
၀ဋ်ကြွေးတွေ မကုန်မချင်း... ...
How Deep Is Your Love On Me (The Bee Gees)
La... La... La... La... La... La...
La... Ah... ....
at 6:38 PM 23 comments:
-- လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ
(နိုင်ငံရေး) ဆောင်းပါး တပုဒ် ရေးမလို.
အနာဂတ်သစ်ကို ရေး မရ
-- အယ်လ်ကိုဟော ဒီဂရီ ၉၄နဲ့...
အပေါစား (ဇ၀က်သာ) တွေကို
နေ့ရော... ညရော... နာရီမသိ
-- ခပ်ညံ့ညံ့ ကိုယ့်သမိုင်းကို
(ဂေးမူတို့ ရဲ့) ထုံထောင်း ကျောက်ခုံဆိုင်
အငန်းမရ လောက်ခေါင် မော့ယင်း
-- ကိုယ့်လောက် မရိုးသားသူတွေထံ
( အောက်ကျ နောက်ကျ) ထောက်ခံစာ
-- အေဘီစီဒီ တံဆိပ်တုံးတွေနဲ့ 
ဖဲသုံးချပ် ကစား နေရတာကိုလည်း
တကယ် မုန်းတယ် ။
-- မဆုံးနိုင်တဲ့ အမုန်းတွေနဲ့ 
ရှံးနေတဲ့ (သက်ရှိ) တကောင်
ဒီ (ရောမ) မြို့ ပျက်လေးထဲမှာ
ပျော်ဝင်နေခဲ့တာ ကြာပေါ့ ။
(တစုံတခုသော) အယူအဆ အတွေးအခေါ်
အကြံအစည် တမျိုးမျိုးပေါ့ ။
-- ချဉ်ခြင်း တပ်လွန်းမက တပ်လွန်းလို့ 
ရင်အုံအတွင်း နက်နက်နဲ့ 
(- - - - -) ၀ပ်ပါမစ်နဲ့ 
၂၁- သမိုင်းထဲမှာ ကျန်ရစ်
(ပါလာခဲ့တောင်မှ) မူးယစ်ရီဝေနေလို့ 
ရွံ့ မုန်းစရာများ ...
( ကိုဆက် )
ဘလော့ရေးခြင်း တလ၊ နှစ်လခန့် နားရပါမည်။
ညီအကို မောင်နှမများ အားလုံးကို
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်ကူး ဖြစ်ပါစေ။
အစစ အရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ။
ဒီဇင်ဘာအတွက် ကဗျာတပုဒ် ရေးခဲ့ပါသည်။
လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ပန်းသီး တလုံး...
ဟိုး... ... အရှေ့မှာ...
အိပ်စက်နေတဲ့ ... ... ... ...